अनुगमन टोली आएपछि पसल बन्द गर्छन् व्यापारी, कारण के ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-05-23T15:02:12.689053+05:45
अनुगमन टोली आएपछि पसल बन्द गर्छन् व्यापारी, कारण के ?
personहेमराज ढकाल access_timeभदौ २८, २०७४ chat_bubble_outline0
भक्तपुर– बुधबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको टोली बजार अनुगमनमा निस्कयो । टोलीको नेतृत्वकर्तामा प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत रवीचन्द्र मिश्र रहेका थिए । मिश्रको नेतृत्वमा गएको टोलीमा प्रहरी, उपभोक्ता मंन्चका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत सहभागिता रहेको थियो ।
टोलीले मध्यपुर थिमी बाहाखा बजारको एउटा पसलमा अनुगमन गर्न भित्र छिरेको थाहा पाएपछि नजिकै रहेको अर्का पसलेले सटर बन्द गरे ।
उक्त स्थानमा रमेश थापा स्टोरमा अनुगमन टोलीले सामानको म्याद गुज्रिएको छ÷छैन र सम्बन्धीत निकाय दर्ता भए÷नभएको जानकारी लियो । अनुगमन टोलीले थापा स्टोरमा भेटिएको किरा परेको पाउरोटीको धुलो, जौको पिठो, धनियाँको धुलो, टोमाटो सस लगायतका सामाग्री जफत गर्यो । थापा स्टोरमा अनुगमन टोली छिरेलगत्तै नजिकै रहेको ठिमी ट्रेड सेन्टरका संचालकले सटर बन्द गरेर हिँडे ।
टोलीले मध्यपुरको बाखाबजार र गठ्ठाघरमा रहेको खाद्यान्न पसल र मिनी मार्टमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा टोलीले चार वटा खाद्यान्न पसलवाट २ वोरा म्याद गुज्रिएको अखाद्य बस्तु बरामद गरेको छ । त्यस्तै, अंकुर कल्पबृक्ष स्टोरवाट म्याद गुज्रिएको ड्राइमिट, भटमासको तेल १६ लिटर, तथा पिठो फेला पारेको थियो । सवै अखाद्य सामाग्री वरामद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगेको छ ।
दशैं तिहार जस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिएसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले बुधबारबाट बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । वजार अनुगमनको क्रममा भक्तपुरका अधिकांस खाद्यान्न पसलमा मूल्य सूचि नराखेको, नगरपालिकामा पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, अखाद्य वस्तुसँगै राखेर खाद्यान्न बिक्रि गरेको, सामान बिक्रि गर्दा बिल दिने नगरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
अनुगमन जिल्लाका चार वटै नगरपालिकामा एक हप्ता सम्म गर्ने प्रशासनले जनाएको छ । पटक पटक यसरी बजार अनुगमन गर्दा कारवाही गरिएका व्यापारीहरुले समेत पुरानै हर्कत अपनाउने गरेको भेटिने गरेको छ ।
बजेट निर्माणमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालय तर माहोल भने फेरियो, पुगेकै हो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्